यी महिला: जसले आफ्नै श्रीमानको हत्या गरेर टाउको सहित आत्मसमर्पण गरिन् !
श्रीमानको हत्या गरेर टाउकोसहित आत्मसमर्पण गरिन् यी महिलाले !
भारतको आसाम राज्यमा एक महिलाले आफ्नो श्रीमानको हत्या गरी टाउकोसहित प्रहरी कार्यालयमा आत्मसमर्पण गरेकी छन् । आसामको लखिमपुरकी गुनेश्वरी बोर्कोटोकीले घरेलु हिंसाबाट आजित भएपछि श्रीमानको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । मंगलबार राती श्रीमान्को हत्या गरेपछि श्रीमानको काटिएको टाउको बोकेर उनी ढोलपुर प्रहरी चौकीमा पुगेकी थिइन् । उनले आफ्नो श्रीमानले नियमित रुपमा मदिरा सेवन गरेर कुटपिट गर्ने बताएकी छिन् ।
* भाडाको निहुमा महिलामाथी चालकको कुटपिट !